IPhone 7 ine bhatani-inonzwika bhatani repamba bhatani rinodonha | IPhone nhau
Inofungidzirwa iPhone 7 ine inodzvinyirira-inonzwika bhatani repamba mabhatani
Chekutanga pane zvese, ndinoda kutaura kuti ini pachangu ndaizozviona zvichishamisa, uye gare gare ndichatsanangura kuti sei, dai iyi mifananidzo yaive yechokwadi. Asi iyo kesi ndeyekuti, akati wandei mifananidzo aka "leaked", rakaburitswa mu mobipicker.com, iyo inoratidza a inofungidzirwa iPhone 7 ine bhatani rinonamira pamba bhatani, kureva, bhatani rekutanga ratisingafanirwe kunyura kuti rishande. Mubvunzo, kana mumwe wavo, ndewokuti: izvo zvatinoona mumifananidzo zvine musoro here?
Zvangu hazvina musoro, kunyange hongu iwe unogona kuva nazvo zvishoma. Nechinhu chimwe chete, nei uchibvisa bhatani repamba uye uchisiya iyo yepamusoro neyepasi micheto? Mhinduro yacho inogona kunge iri chirevo chakajeka chechinangwa: ivo vanofunga kuzviisa pachiratidziri mune ramangwana, asi havasati vakwanisa kuzviita izvozvi. Kune rimwe divi, bhatani repamba chinhu chakasarudzika cheiyo iPhone (chikumbiro chaSteve Jobs) uye nguva ingadai isina kusvika pakuibvisa.
Ko iyo iPhone 7 inosvika "isina" bhatani repamba?
Sezvauri kuona mumufananidzo wekutanga, bhatani rekutanga rinenge riri kudhirowa, chiratidzo chekuti paisazove neTouch ID mhete. Kune rimwe divi, uye ichi ndicho chikonzero chikuru nei ndichifunga kuti iyi iPhone inhema, kamera ne sensor kumberi zvakatama uye zvionekwe pamativi emutauri. Ndinovimba OnLeaks zvakanyanya uye neshanduro yaakaburitsa uye, sezvaungaona mumufananidzo unotevera, maburi ekamera nema sensors ari munzvimbo imwechete seyaiyo iPhone 6s.
Chero zvazvingaitika, hapana chinosimbiswa kudzamara chazoburitswa zviri pamutemo uye izvo zvayakapa uye maschematics zvave kubuda. OnLeaks, pakati pazvo, zvinoshamisa, pane imwe isingaratidze chero kudhirowa kumberi, haigone kusimbiswa 100% futi.
Zvinotaridza kwandiri kuti mufananidzo ndewenhema asi, pandinonyora iyi posvo, handigoni kurega kufunga nezvenzira nyowani yekuvhura foni uye nekutsakatika kweiyo «Slide yekuvhura» Tichava nechishamiso here munaGunyana?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Inofungidzirwa iPhone 7 ine inodzvinyirira-inonzwika bhatani repamba mabhatani
Apple inokunda patent ye iPhone ine 360º yakakomberedzwa uye yakaputirwa skrini
IOS 10 yekuvandudza maturusi Apple haana kutaura